प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? जान्नुहोस - ज्ञानविज्ञान
प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? जान्नुहोस
यस्तो प्रेम कुनै पनि प्रकारको दायरको बन्धनमा बाँधिएको हुँदैन । जात, धर्म या उमेरले नै पनि यस्तो प्रेममका कुनै रुकावट ल्याउन सक्दैनन् ।
बौद्ध धर्ममा यस्तो प्रेमलाई ‘यूनिभर्सल लभ’ भनिन्छ । यस प्रकारको प्रेममा शान्ति र खुसी प्राप्ती हुन्छ ।
यस्तो प्रेम प्राचिन ग्रीसका प्रेमका देवता मानिने ‘ईरोश’प्रति समर्पित मानिन्छ । रोमान्टि प्रेमलाई सबैभन्दा खतरनाक प्रेम पनि भनिन्छ । यति खतरानाक कि यो प्रेमले धेरैजसो समस्याहरु निम्त्याउँछ ।
यस परिभाषाअन्तर्गत विवाहेत्तर सम्बन्धलाई रोमान्टिक प्रेमको संज्ञा दिने गरिन्छ । रोमान्टिक प्रेमको अर्को परिभाषा पनि छ ।
जसमा भनिन्छ कि प्रेममा परे पछिको पहिलो अनुभव नै ‘रोमान्टिक लभ’ हो । यस प्रकारको प्रेममा परेका जोडीहरु एक दोस्रोको विना बाँच्न नै नसकिने सोच्छन् ।
Topics #प्रेम कति प्रकार
Don't Miss it बोक्रामा कालो दाग भएको केराले धेरै प्रकारका रोगबाट बचाउँछ,जस्तै
Up Next एस्ता छन् बच्चाको उचाई बढाउने उपाय
हरीयो खुर्सानीको प्रयोगबाट कयौं प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट मुक्त हुन्छ
हरियो खुर्सानीमा ‘भिटामिन ए’, ‘बी ६’, ‘फलाम’, ‘कपर’, पाइन्छ । खानाको स्वाद बडाउन हामीले खुर्सानीको प्रयोग गर्छौ । यस्ता छन् खुर्सानीका…
हरियाे धनियाँ खादा ध्यान नपुगे स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्छ
हरियाे धनियाँ प्रायः सबै परिकारमा उत्तिकै चल्ने गर्छ । दाल, तरकारी, अचार, माछा, मासु हाेस् कि अन्य जुनसुकै परिकारमा हरियाे…